के रोहितको चलचित्रमा अनमोलले स्थान पाउँलान ? - Saptakoshionline
के रोहितको चलचित्रमा अनमोलले स्थान पाउँलान ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र ३०, २०७७ समय: ५:०७:५७
इटहरी, पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा निकै निर्माता निदेशकहरुले लगानि गरेको देख्न सकिन्छ जसमा केहि सफल भए त केहि असफल तर कोहि यस्ता निर्माता छन् जुन छोटो समयमानै नाम र दाम कमाउन सफल भएका छन् जसको एउटा उदाहरण हो रोहित अधिकारी , उनले निर्माण गरेका दुई चलचित्र ‘गाजलु र छ माया छपक्कै’ ले राम्रो स्थान पाएको थियो । उक्त चलचित्र सफल भएसंगै उनले पुन अर्को चलचित्र बताृने दाउमा छन् । उनको चलचित्रलाई दिनेश राउतले निर्देशन गर्दैछन् ।
रोहितले दिनेशलाई चलचित्र निर्देशनका लागि ५ लाख पेश्की रकम समेत दिइसकेका छन् । रोहितले चलचित्र क्षेत्रमा नाम कमाएको प्रख्यात कलाकारको खोजिमा छन् । उनको उक्त चलचित्रको अभिनेता अनमोल केसि रहने हल्ला पनि सिने बजारमा सुनिन थालेको छ । तर, यथार्थको लागि भने प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यस्तै रोहितले चलचित्रका लागि नयाँ अनुहार पनि भित्राउने संकेत गरे । रोहित दिनेश राउतसँगको सहकार्यमा चलचित्र निर्माणमा ह्याट्रिक गर्ने दाउमा छन् । यसैले, उनले यो चलचित्रलाई बलियो बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
प्रविन बेडवालको ‘मुटु भित्रै राख्छु तिमी लाइ‘ सार्बजनिक (भिडियो सहित)
भर्खरै मात्रै सकिएको चर्चित गायन रियालिटी सो नेपाल आइडल ३ को फस्ट रनरअप बन्न सफल गायक प्रविन बेडवालको नयाँ गीत सार्वजनिक...
मदिरा सेवन गर्नेहरु कोरोना संक्रमणको धेरै जोखिममा: चिकित्सक
मदिरा र चुरोटका अम्मलीलाई कोरोना भाइर संक्रमणको धेरै जोखिम हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प...
हामिले बिश्वमा धेरै अनौठा घटनाहरु सुनेका छौ । यतिखेर अर्को घटना समेत बाहिरिएको छ । अस्ट्रेलिया र बोत्स्वानाका वैज्ञानिकह...
वर्षा शिवाकोटीसँग यस्तो रोमान्टिक अवस्थामा भेटीए पल
काठमाडौँ । गुडी जाने रेल, आमा तिमी कहाँ छौ, गुराँश फुल्यो बनैमा, लगायतका चर्चित गीतका गायक किशोर शिवाकोटीको नयाँ गीत &...
‘के गर्नु माया म’ (भिडियो)
हट मोडेल रिया श्रेष्ठ र दिपक लामा फिचर्ड ‘के गर्नु माया म’ सार्वजनिक (भिडियो) रिया श्रेष्ठ र दिपक लामाको दमदार नृत्य रह...